कोभिड महामारीमा शरीरको अक्सिजन लेभल यसरी बढाउनुहोस् « Lokpath
कोभिड महामारीमा शरीरको अक्सिजन लेभल यसरी बढाउनुहोस्
कोभिड १९ को दोस्रो भेरिएन्ट आम मानिसमा देखापर्न थालेपछि अहिले सर्बत्र संत्रासको वातावरण देखिएको छ । पछिल्लो पटक देखिएको संक्रमण केही कडा किसिमको रहेको र यसले श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गरेर मानिसको ज्यान लिने गरेको घटना देखिएको छ ।
कोभिड १९ लाई उपचार गरेर भन्दा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर नियन्त्रणमा राख्न सकिने जनस्वास्थविद्को सल्लाह अनुसार सरकारले बैशाख १६ गते देखि लकडाउनको घोषणा गरिसकेको छ । लकडाउनले कोभिड १९ को संक्रमणमा कमी ल्याएपनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने हुनाले आफ्नो सुरक्षा आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
आफुलाई कोरोना संक्रमण भएमा वा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना बढी हुने देखेमा योगमा रहेका केही श्वासप्रश्वासका आसनहरु सहयोगी सिद्ध हुने देखिन्छ । योगमा रहेका प्राणायामका केही आसनहरुलाई नियमित रुपमा गर्दा शरीरमा अक्सिजनको स्तर घट्ने सम्भावना निकै कम रहने योग ऋषी बाबा रामदेवले बताए । बाबा रामदेवले कोभिड १९ वाट बच्न सुझाएका केही योग आसनहरु यसप्रकार रहेको छ ।
प्राणायामको एक आसनको रुपमा रहेको अनुलोम–बिलोम नियमित गर्ने ब्यक्तिको शरीरमा अक्सिजनको स्तर ९५–१०० सम्म रहन्छ । यदी कसैलाई शरीरमा अक्सिजनको स्तरमा कमी आयो र तत्काल अस्पताल पु¥याउन सकिएन भने केही समय अनुलोम–बिलोम गराउदाँ उसको शरीरमा अक्सिजनको स्तर बढ्ने गर्छ ।
कसरी गर्ने अनुलोम–बिलोम
पलेटी मारेर कुनै पनि आसन (सुखासन वा पद्मासन) मा बस्ने । दाहिने हातको चोरी औंलालाई बुढी औंलाको फेद छुवाउने, दाँया हातको बुढी औंलाले नाकको प्वाललाई बन्द गरेर देब्रे नाकको प्वालवाट बिस्तारै लामो समय लगाएर श्वास लिने । यसरी श्वास लिएपछि केही सेकेण्ड रोकिने । माईली औंलाले श्वास लिएको नाकको प्वाललाई बन्द गर्ने । बुढी औंलाले बन्द गरेको नाकको प्वाललाई छोड्ने र श्वासलाई बिस्तारै बाहिर फ्याक्ने । फोक्सोमा रहेको सबै हावालाई बाहिर फ्याकेपछि सोही प्वालवाट फेरी बिस्तारै श्वासलाई तान्ने र देब्रे नाकवाट बाहिर फ्याक्ने ।
यो क्रियालाई विहान ब्रम्हमुर्हतको समय (सूर्योदय हुनु भन्दा अगाडी) बिस्तारै ५–१० मिनेट नियमित बिस्तारै गर्ने ।
शरीरमा अक्सिजनको स्तरमा कमी आएमा भस्त्रिका प्राणायामको सहायताले पनि शरीरको अक्सिजन स्तरलाई बढाउन सकिन्छ ।
यो प्राणायाम पनि सुखासन वा पद्मासनमा बसेर बिस्तारै दुबै नाकवाट लामो समय लगाएर श्वासलाई फोक्सो भरिन्जेल हावा लिने र सोही गतीमा नाकवाट श्वासलाई बाहिर फ्याक्ने गर्नुपर्छ ।
शरीरमा अक्सिजन लेभललाई बढाउन कपालभाती प्राणायाम पनि सहयोगी हुन्छ । प्राणायामको यो आसन सुखासन वा पद्मासनमा बसेर नाभीको भागलाई भित्र पठाउदैं श्वासलाई बाहिर फ्याक्ने गर्नुपर्छ । श्वासप्रश्वासको गतिलाई तिब्र गर्नु भन्दा मन्द गर्दै समयलाई बढाउदै लैजानु राम्रो हुन्छ ।
फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउने उपाय
कोभिड–१९ को प्रभाव फोक्सोमा पर्ने हुनाले फोक्सोलाई स्वस्थ बनाउनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय देखिएको छ । यसका लागि नियमित तातो पानीको वाफ लिदाँ फोक्सोले राम्ररी अक्सिजन लिन सक्छ । यदी तातोपानीको वाफ लिने हो भने उक्त पानीमा समान मात्रामा कपूर, ज्वानो, ल्वाङको तेल, पेपरमिन्टको तेल हालेर वाफ लिने गरेमा फोक्सो स्वस्थ हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: २०७८,बैशाख,१५,बुधबार १८:२९
स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? यस्तो गर्नुस् जीवनशैली
स्वस्थ हुने चाहना सबैको हुन्छ । तर कसरी स्वस्थ हुने भन्ने विषयमा द्विविधा भएको कारण आम मानिसहरू चाहेर पनि स्वस्थ
यस्ता संकेतले नै बताउँछ शरीरमा कुन रोग लाग्दै छ भनेर
स्वस्थ जीवनशैली अपनाउँदा अपनाउँदै पनि कहिले काहीँ हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरूको सङ्क्रमण हुन सक्छ । कतिपय रोगहरू चिकित्सक कहाँ गएर
वर्षा मौसममा चामल र गेडागुडीमा किरा लाग्न कसरी नदिने ?
वर्षा महिनामा मौसम ओसिलो हुन्छ, जसको कारण धेरैको घरमा राखेको चामल र गेडागुडीमा किरा पर्ने गरेको होला रु यस्तो अवस्थामा
सरकारले चासो नदिने हो भने कोरोना सङ्क्रमण अझ भयावह हुन्छ -डा. ध्रुव गैरे (भिडियो सहित)
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का एशोसियट प्रोफेसर एवं वीर अस्पतालका वरिष्ठ जनरल फिजिसियन डा. ध्रुव गैरेलाई बिमारीहरूको उपचार गर्दा